Daawo-Weriye soo bandhigay shirqool Itoobiya u dhigaysay Soomaaliya iyo halista soo wajaha. – Puntland News
Home 2017 February 17 Somali News Daawo-Weriye soo bandhigay shirqool Itoobiya u dhigaysay Soomaaliya iyo halista soo wajaha.
Daawo-Weriye soo bandhigay shirqool Itoobiya u dhigaysay Soomaaliya iyo halista soo wajaha.
February 17, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 1
Waxaa magaalada Muqdisho iyo daafaha Caalamka ka socda olol looga hortagaayo Gumeysiga muuqda ay Dowlada Ethiopia ku dooneyso inay ku xakameyso Siyaasada Somalia. Ololaha ayaa waxaa qeyb ka ah Weriyayaal rug cadaa ah oo ka dhiidhinaaya Gumeysiga ay Dowlada Ethiopia ku heysa Somalia ee aan aheyn mid u muuqda Siyaasiyiinta Soomaalida.
HALKAAN RIIX SI AAD U DAAWATO MUUQAALKA WERIYAHA IYO XOGTA
One thought on “Daawo-Weriye soo bandhigay shirqool Itoobiya u dhigaysay Soomaaliya iyo halista soo wajaha.”
Nuh Mohamed February 18, 2017 at 12:51 am · Edit
Ayaanke walaale sida aynu ka wada warqabno dad badan oo inaga mid ah waxaa ka lumay Kartidtii iyo Karaamadii Rabaaniga.. waa Aduun Dib u xun, waayoo waxaad arkeysaa qofweyn oo masuuliyad loo idmaday oo Dalkiisii, Dadkiisii iyo Diintiisii hanti yar ku iibsanaya, misna Dalka dibadiisa u cararaya. Kheyr Allah ha kusiiyo laakin maanta dhamaanteen waxaa inlooga baahan yahay Hadal yar iyo Hawl-badan iyo Odayaasha aniga oo kale, oo qorax sii dhaceysa ah in aney dada soo koreysa la dhicin oo la iska illliyo.